June 1, 2019 - ThutaStar
June 1, 2019 Thuta Star 0
တခါတရံ ကျွန်မတို့ဟာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်စေ၊နက်ဖြန်အရေးကြီးအစည်းအဝေးရှိလို့ ဖြစ်စေ ညအိပ်မပျော်တာမျိူးရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း စောစောအိပ်ပျော်မှသာ နောက်နေ့မနက်စောစောထနိုင်ပြီး နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိူးမှာဆိုရင် အောက်ပါ ၄-၇-၈ နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုကြည့်ပါ။ -နှာခေါင်းနှစ်ဖက်ဆီကနေ လေကိုဖြည်းဖြည်းချင်း ၄စက္ကန့်စာ ရှုသွင်းပါ။ -ထို့နောက် ၇စက္ကန့်ကြာ အသက်အောင့်ပါ။ -ပြီးနောက် ပါးစပ်ကနေ […]
၄ ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း တစ်သောင်းခွဲ အောင်ဘာလေထီဆုကြီးကို မန္တလေးမြို့ မြရည်နန္ဒာရပ်ကွက် ဗ ၂၃ ထဲက ပွင့်သစ်ကွမ်းယာဆိုင် ပိုင်ရှင်ဇနီးမောင်နှံက ဆွတ်ခူးသွားပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ မြရည်နန္ဒာရပ်ကွက် ဗ ၂၃ မှာ နေထိုင်တဲ့ ပွင့်သစ်ကွမ်းယာ ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ ကိုဝင်းကျော်နဲ့ မသီတာအေးတို့ဟာ မေလလဆန်းပိုင်းထဲက အမြဲထိုးနေကျ […]
မနက်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ထမင်းဟင်း ညနေ ကျောင်းဆင်းလို့ ထမင်းဗူးဆေးချိန် အရမ်းနံနေတာ မသင်္ကာလို့ ရေနွေးပူနဲ့ ပြုတ်လိုက်သောအခါ
အတွေ့အကြုံလေးမျှဝေပါရစေရှင့် မေမေတို့ရေ … ကျောင်းဖွင့်ခါနီးပြီဆိုတော့ သားငယ်သမီးငယ်တို့ကျောင်းတက်ဖို့ လိုအပ်တာတွေ ဝယ်စုနေကြပြီပေါ့နှော်… ကလေးထမင်းဗူးဝယ်ရင် ပုံထဲက ဗူးမျိုးမဝယိမိပါစေနဲ့နှော်… မနှစ်က ကျမသမီးအတွက် frozen တဗူး hello kitty တဗူး ဝယ်ပေးဖူးပါတယ် ဈေးလဲချို ချစ်စရာလေးမို့ ၂ ဗူး အလဲအလှယ်ထည့်ရင်း တလလောက်နေမှ သတိထားမိပါတယ် […]
“ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သဘောအကျဆုံးက ဆံပင်ပဲ” ဆေးနည်းတစ်ခု လုပ်ကြည့်တာ ၂ ကြိမ်တည်းနဲ့ သိသာတယ်။ အစောက သိခဲ့ရင် နှစ်ခွဖြစ်လို့ဆိုပြီး ညှပ်ချခဲ့ရတဲ့ ဆံပင် တစ်ထွာကျော်ကို နှမျောနေရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ရှားစောင်းလက်ပတ် ၂ ချပ်လောက်ရှာ ဘေးအစွန်းနှဖက်ကို လှီးချ ပြီးတော့ အနေတော်တုံး။ အုန်းဆီ စစ်စစ်ကို […]
ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့အခါ ဒိဋ္ဌဓမ္မ ဒီဘဝမှာပဲ အကျိုးပေးအောင် စံချိန်ကိုက်ရွတ်ဖတ်နည်း (၄)နည်းရှိသည်။ ၄င်းတို့မှာ…… (၁)ခန္ဓာကိုယ် သန့်ရှင်းစေရမည်။ (၂)အချိန်မှန်မှန်ရွတ်ဖတ်ရမည်။ (၃)ပီပီသသ အသံကျယ်ကျယ်ရွတ်ဖတ်ရမည်။ (၄)ပြီးလျှင် အမျှဝေ မေတ္တာပွားရမည်။ အဓိပ္ပာယ်အကျယ်- (၁) ခန္ဓာကိုယ်သန့်ရှင်းစေရမည်။ ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်လျှင် အနီးနားရှိ နတ်ဗြဟ္မာများ တရားနာလာကြသည်။ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်သူက နံစော်နေပါလျှင် ပဋ္ဌာန်းတရားနာသည့် နတ်ဗြဟ္မာတို့က […]
ပွင့်သစ်ကွမ်းယာဆိုင်ပိုင်ရှင်ဇနီးမောင်နှံ ကိုဝင်းကျော်နှင့် မသီတာအေးတို့ရဲ့ ကံထူးခြင်းဖြစ်ရပ်…
မန္တလေး ၁ ဇွန် လေးကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲ အောင်ဘာလေထီဆုကြီးကို မန္တလေးမြို့ မြရည်နန္ဒာရပ်ကွက်၊ ဗ(၂၃)တွင် နေထိုင်သည့် ပွင့်သစ်ကွမ်းယာဆိုင်ပိုင်ရှင်ဇနီးမောင်နှံ ကိုဝင်းကျော်နှင့် မသီတာအေးတို့က ဆွတ်ခူးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ထီပေါက်သူဇနီးမောင်နှံသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ထိန်ကန်ရွာကျေးရွာ ဇာတိဖြစ်ပြီး မန္တလေးမြို့တွင် ရောက်ရှိနေထိုင်လာခဲ့သည်မှာ ၁၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း ပွင့်သစ်ကွမ်းယာဆိုင်ကို ဆယ်နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်ကာ ၎င်းတို့တွင် သားနှစ်ယောက်နဲ့ […]
သုံးရက် ထဲ နဲ့ ၇ ပေါင် ကနေ ၁၂ လောက်ထိ ပိန်ချင်ပါသလား ??? side effect မရှိပဲ သဘာဝအတိုင်း အဆီကျ သွယ်လျစေဖို့ သင့်မှာ သည်းခံနိုင်စွမ်း ၃ ရက်ပဲ လိုအပ်ပါတယ် 😉😉😉 အစိမ်းရောင်ဖျော်ရည် များနဲ့ ၃ရက်တာ […]
အသက်အရွယ်ရလာရင်မျက်နှာရဲ့အရေပြားကတွဲကျပါတယ်ဒါကမျက်နှာကကြွက်သားတွေအားနည်းလာတာသာမကပဲကိုလာဂျင်ဓာတ်လျော့ကျလာလို့လဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်ကြီးခြင်းရဲ့နောက်တချက်ကတော့ မျက်နှာကအရိုးတွေရွေ့ကုန်လို့ပါပဲ။ အကျိုးဆက်ကတော့မျက်နှာကေ ဝဝါးလာပြီးပါးနဲ့မေးစေ့တွေလျော့တွဲလာတာပါ။ဒါပေမယ့်ဂျပန်လူမျိုးဖြစ်တဲ့ချီယော့ဟယရှီကဒီပြဿနာကိုရှင်းဖို့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မျက်နှာမှာရှိတဲ့သွေးတစ်ရှူးတွေလည်ပတ်ဖို့နဲ့ဦးခေါင်းခွံကအရိုးတွေပုံမှန်အတိုင်းရှိစေဖို့ကူညီမယ့်အထူးနှိပ်နည်းကိုသိခဲ့ပါတယ်။ထိုစနစ်ကိုခိုရုဂိလို့ခေါ်ပါတယ်။ Bright Sideကထိုနှိပ်နည်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ မျှဝေပေးဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့အတွက်ခေါင်းစဉ်ရဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့အပိုဆုလေးကိုအလွတ်မခံနဲ့နော်။ အရေးကြီးတဲ့မှတ်စု! ကြွက်သားတွေကနှစ်ကြာတာနဲ့အမျှလျော့လာပြီးအဆီတွေပြန့်နှံလာပါတယ်။ငယ်ရွယ်တုန်းမှာတော့အလွှာတခုတည်းဖြစ်အောင်အဆီတွေကပေါင်းသွားပေမယ့်အသက်ရလာရင်တော့တနေရာတည်းမှာစုပုံသွားပါတယ်။ သင်စမလုပ်ခင်မှာမှန်ကိုယူပြီးအနှိပ်ဆီလေးလိမ်းပါ။ အဲဒါကသင်လုပ်နေတာမှန်ရဲ့လားဆိုတာသိစေပြီးအပိုပွတ်တိုက်မှုတွေကိုရှောင်ပေးပါတယ်။ပြီးတော့သင့်အရေပြားကိုလဲသန့်စင်သင့်ပါတယ်။ ဒီနှိပ်နည်းကိုတော့ မျက်နာမှာဒဏ်ရာရှိသူ နာတာရှည်ရောဂါသည်နဲ့သွေးဖြူဆဲလ်မူမမှန်သူတွေစတဲ့ ENT ရောဂါရှိသူတွေမလုပ်သင့်ပါဘူး။သင့်မျက်နှာကိုနာကျင်မှုမရှိစေဘဲစပ်စပ်လေးဖိနှိပ်ရမှာပါ။ခိုရုဂိနှိပ်နည်းကမျက်နှာအလေးချိန်ကိုကျစေပါတယ်။ ၁။ပါးကိုမြှင့်ခြင်း သင့်တံတောင်ဆစ်ကိုစားပွဲပေါ်တင်ပါ။လက်သီးဆုပ်ပါ။မျက်နှာမှပါးရိုးတွေကိုလျှော့ထားပါ။သင့်ကြွက်သားတွေပြေလျော့နေအောင်ပေါ့။ထိုအနေအထားအတိုင်း၅စက္ကန့်နေပါ။ ၂။နဖူးကိုလုပ်ခြင်း သင့်ခေါင်းကိုနောက်သို့အနည်းငယ်ကွေးပါ။လက်သီးဆုပ်ပါ။သင့်လက်ခလယ်ဖြင့်နဖူးကိုဖိပါ။လက်ကိုအပေါ်သို့ဆက်သွားပြီးဆံပင်မှာနား ထိရောက်သည်အထိဆွဲပါ။ထို့နောက်လက်ချောင်များကိုညှပ်ရိုးထိရောက်အောင်လည်ပင်းမှဖြည်းဖြည်းချင်းရွေ့ပါ။ ၄။နဖူးကိုချောအောင်လုပ်ခြင်း လက်သီးဆုပ်ပါ။ သင့်လက်သီးအလယ်ဖြင့်မျက်ခုံးမှဖြည်းဖြည်းချင်းဆံပင်နားရောက်တဲ့အထိပွတ်ဆွဲပါ။ အခုအရင်အနေထားအတိုင်းလက်ကိုပြန်ထားပါပြီးလျှင်နောက်တခေါက်အပေါ်သို့ပြန်ဆွဲပါ။ဒီလိုနဲ့နဖူးကချောမွတ်လာမှာပါ။ […]
နေရွှေသွေးအောင်ကတော့ Cover Song တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို စိတ်ဝင်စားအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ သူတစ်ဦးပါ။ သူ့ရဲ့ အမိုက်စား၊ အလန်းစား Cover Song တွေက ကြည့်ရှုသူတွေကို အမြင်ရသာ အသစ်အဆန်းတွေပေးစွမ်းနိုင်တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော် မင်းသမီး သရုပ်ဆောင် အတော်များများကို သူ့ရဲ့ Cover Song ထဲမှာ […]
(၄) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင် ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။
(၁.၆.၂၀၁၉) ApannPyay ( 1.6.2019 ) ဒီနေ့ထွက်ရှိသော (၄) ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းခွဲ အောင်ဘာလေထီ ကံထူးရှင် ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ ( 1.6.2019 ) ဒီနေ့ထွက်ရှိသော (၄) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းတစ်သောင်ခွဲ ကံထူးရှင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မြရည်နန္ဒာမြို့သစ် ဗ၂၃ […]